Aterineto amin'ny fiaramanidina manerana an'i Etazonia sy Kanada tsy ho ela ao amin'ny 5G
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Aterineto amin'ny fiaramanidina manerana an'i Etazonia sy Kanada tsy ho ela ao amin'ny 5G
Ny serivisy an-habakabaka mampiasa teknolojia 5G ho an'ireo mpandraharaha fiaramanidina amerikana avaratra dia ho tanteraka tsy ho ela.
Ny fifandraisana vaovao avy any an-tany avy amin'ny SmartSky dia manome ny mpanjifa Honeywell safidy hafa amin'ny fifandraisana Internet izay manome traikefa ho an'ny mpampiasa mitovy amin'ny hita ao an-trano. Honeywell koa dia mpamatsy ny Inmarsat's GX Aviation amin'ny alàlan'ny zanabolana, izay ampandehanan'ny Hardware JetWave ™ an'ny Honeywell. Ankoatr'izay, Honeywell dia manolotra vahaolana fiarovana izay manome fifandraisana mivantana amin'ny rohy data eo amin'ny mpanamory sy ny mpanamory ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny tambajotram-satana L-band.
Ny tambajotran-tserasera SmartSky dia mampiasa teknolojia 5G hanome vahaolana IFC azo antoka, azo antoka ary takatry ny zotram-piaramanidina izay te hanana fampifandraisana hazavana feno ho an'ny fiaramanidin'izy ireo.
Ny tamba-jotra SmartSky dia manome famantarana azo antoka sy ambany latina ho an'ny fiaramanidina rehetra ao anaty tamba-jotra, miantoka ny fahombiazany na inona na inona famoahana tambajotra. Ny andry tsirairay dia mifampiresaka amin'ny fiaramanidina iray monja amin'ny fotoana iray, raha ampitahaina amin'ny tolotra mitovy amin'izany izay mizara hazandrano amin'ireo fiaramanidina marobe. Ao amin'ny trano kely, ny mpandeha dia hiaina fifandraisana tsy mitongilana mitovy amin'ny an'ny vahaolana birao ifotony. Io haavon'ny serivisy io dia ahafahan'ny mpandeha manao ny fotoanany eny amin'ny habakabaka araka izay tratra. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fampiharana fampiharana cloud-based, fifandraisana amin'ny alàlan'ny tambajotra tsy miankina virtoaly, fanaovana famindrana angona manan-danja, fitetezana Internet na horonan-tsary mivantana.
Manaiky ny hitarika ny fitohizan'ny fiaramanidina ny bandy lehibe
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Cebu Pacific dia tia ny Airbus ary miseho izany